आगामी निर्वाचनमा १४ लाख नयाँ मतदाता थपिए,सरप्राइज परिणाम आउने अनुमान - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १२:३२ |
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि झन्डै १४ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन्। ती मतदाता नै आगामी मंसीरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निर्णायक मत हुने आँकलन गर्न थालिएको छ । जसले गर्दा यसपटक निर्वाचनको परिणाम सरप्राइज हुनसक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कूल मतदाता १ करोड ४० लाख ५४ हजार थियो। निर्वाचन सकिएलगत्तै आयोगले पुनः स्थानीय स्तरमै मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो। त्यसपछि झन्डै १४ लाख नयाँ मतदाता थपिए। आयोगको आँकडाअनुसार स्थानीय निर्वाचनपछि १३ लाख ७० हजार २४९ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। अहिले कूल १ करोड ५४ लाख २४ हजार ७,३१ मतदाता रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालकाअनुसार थपिएका अधिकांश मतदाता स्थानीय तह निर्वाचनपछि १८ वर्ष पुगेका युवा हुन् भने बाँकी पहिले नामावली संकलनमा छुटेकाहरु हुन्।
युवाहरु मतदान प्रक्रियामा सक्रिया सहभागी नहुने विगतका तथ्यांकले देखाए पनि यो पटकको निर्वानमा सक्रिय सहभागी हुने आयोगको विश्वास छ ।
युवाको मत कसले पाउँला त ?
विश्लेषकहरुका अनुसार प्रमुख राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा र उम्मेदवारमा पुरानै अनुहार हाबी भएकाले युवाहरु नयाँ शक्तितिर ढल्किन सक्ने खतरा रहेको छ ।
प्रमुख दलहरूमा युवा उम्मेदवारले अझै ठाउँ नपाएकाले युवा नयाँ दलतिर आकार्षित भएको देखिन्छ। विश्लेषकहरुका अनुसार ४० प्रतिशत युवा वैकल्पिक शक्तितिर आकार्षित हुने सम्भावना छ। नयाँ दलहरु सोसल मिडियामा अपडेट भइरहने भएकोले पनि नयाँ दलहरुले युवाको मन तान्ने देखिन्छ।
कहाँ कति थपिए मतदाता ?
Previousअष्ट्रेलियामा नेपालीद्धारा सञ्चालित हाम्रो कलेजको वार्षिकोत्सव सम्पन्न,गुणस्तरीय सेवाको प्रतिवद्दता
Nextमायाः फ्रेस सेकुवा कि खै लागेको झिर ?
उपचारमा खटिएका चिकित्सकलाई नै स्वाइन फ्लु संक्रमण
१६ चैत्र २०७१, सोमबार १०:२९
रुसको रक्षा मन्त्रालयको विमान ब्ल्याक सीमा दुर्घटनाग्रस्त
१० पुष २०७३, आईतवार ०५:५५